Madaxweyne Putin oo si adag ugu digay Mareykanka | Xaysimo
Home War Madaxweyne Putin oo si adag ugu digay Mareykanka
Madaxweyne Putin oo si adag ugu digay Mareykanka
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay dhiggiisa Mareykanka Joe Biden in cunaqabateynta cusub ee la xiriirta arrimaha Ukraine lagu soo rogo dalkiisa haddii ay dhacdana ay horseedi karto burbur buuxa oo ku yimaada xiriirka labada dal.
Isagoo taleefoon kula xiriiray goor dambe oo ahayd Khamiistii, ayuu madaxweynaha Ruushka wuxuu dhiggiisa u sheegay in cunaqabateyn cusub ay noqon doonto “khalad weyn”. oo la galay.
Mr Biden ayaa dhanka kale u sheegay Mr Putin in Mareykanka iyo xulafadiisa ay jawaab adag ka bixin doonaan duulaan kasta oo lagu qaado Ukraine.
Wicitaankan oo uu dalbaday Ruushka ayaa ahaa kii labaad ee labada hogaamiye bishan dhex mara, waxaana uu socday ku dhawaad ​​hal saac.
Waxay astaan ​​u tahay dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu qaboojinayay xiisadda ka taagan xuduudda bari ee Ukraine ay la wadaagto Ruushka, halkaasoo saraakiisha Ukraine ay sheegeen in in ka badan 100,000 oo askari oo Ruush ah loo diray.
Ciidamada faraha badan ee uu Ruushka daad-guureey ayaa waxaa walaac ka muujiyay reer galbeedka, iyadoo Mareykanka uu ugu hanjabay Putin cunaqabateyn uu ku tilmaamay mid uusan Ruushka horay u arag waa haddii Ukraine uu weeraro.
Hase yeeshee, Ruushka, ayaa beeniyay inay qorsheynayaan inay duulaan ku qaadaan dalkaas, waxayna sheegeen in ciidammadu ay halkaas u joogaan dhoola-tus uun. Waxa uu Ruushku sheegay in uu xaq u leeyahay in uu xor u yahay ciidamadiisa inuu geysto meelkasta oo ka mid ah dhulkiisa.
In kasta oo labada dhinac ay digniino is dhaafsadeen intii uu socday wicitaanka, haddana la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka Yuri Ushakov ayaa wax yar uun ka dib u sheegay warfidiyeenka in Mr Putin uu “ku faraxsan yahay” wada hadalka.
Sarkaal sare oo Maraykan ah oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in hadalkaasi uu ahaa “mid dhab ah”.
“Madaxweyne Biden wuxuu ku celceliyay in horumarka la taaban karo ee wada-hadallada noocaan oo kale ah ay ku dhici karaan oo keliya xaalad deggan ,” Xoghayaha Warfaafinta ee Aqalka Cad Jen Psaki ayaa sidaasi tiri.
“Wuxuu si cad u sheegay in Maraykanka iyo xulafadiisa ay si adag uga jawaabi doonaan haddii Ruushku uu weeraro Ukraine,” ayay raacisay.
Saraakiisha Mareykanka iyo Ruushka ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Geneva bisha soo socota iyadoo Aqalka Cad uu sheegay in Mr Biden uu ku booriyay dhiggiisa Ruushka inuu raadiyo xal diblomaasiyadeed.
“Waxaan aaminsanahay in wadahadalo lagu xalin karo dhammaan dhibaatooyinka degdega ah ee na dhexmara,” Mr Dmitry Peskov yiri.
“Waxaan daabuli doonnaa gantaallada. Laakin tani waa doorashadiina, ma ahan wax inaga aan dooneyno,” ayuu yiri Dmitry Kiselev, oo soo bandhigayay barnaamijka ugu caansan ee TV-ga qaranka Ruushka, isla markaana door muhiim ah ka ciyaara faafinta farriinta Kremlin-ka ee dadweynaha.
Mr Kiselev, oo ay saaran tahay cunaqabatayn dhanka reer galbeedka, ayaa sidoo kale madax ka ah warbaahinta dawladda.
“Haddii Ukraine ay ku biirto Nato ama Nato ay horumariso kaabayaasha militariga halkaas, waxaan qori madaxa kaga qaban doonnaa Mareykanka, waxaan leenahay awood ciidan. “Ruushka waxa uu haystaa hubka ugu tayada badan aduunka – kuwa xawaarahoooda dheereeya.
“Ruushka diyaar ma u yahay inuu awood u isticmaalo inuu difaaco khadadka cas?” Waxaan su’aashaasi weydiiyay Mr Kiselev.
“Boqolkiiba boqol, sababtoo ah Ruushka tani waxay u tahay su’aal ku saabsan nolol ama geeri.”
“Balse Ruushka ma waxa uu u taliyaa deriskiisa oo waxaad leedihiin Kazakhstan, Azerbaijan, Moldova iyo dhammaan jamhuuriyadii hore ee Soofiyeedka wax xiriir ah lama yeelan karin Nato?”
“Wadamadan waxaa la dhihi karaa waa kuwo nasiib badan ama kuwa nasiib xun in ay daris la noqdaan Ruushaka taasi waa xaqiiqda taariikhiga ah, ma bedeli karaan taas.”
Waxay la mid yihiin Mexico. Waa nasiib fiican ama nasiib xun in Mareykanka aad daris la noqoto, “ayuu yidhi Mr Kiselev.
“Way fiicnaan lahayd in aan is waafajino danahayaga oo aan la dhigin Ruushka meel ay gantaallo nagu soo gaaraan afar daqiiqo,” ayuu raaciyay. “Ruushka waxa uu diyaar u yahay in uu abuuro khatar taasi la mid ah, iyada oo hubkeeda geynaysa meel u dhow xarumaha go’aan qaadashada. Laakiin waxaan soo jeedinaynaa hab looga fogaado in taasi ay dhacdo, oo aan la abuurin hanjabaado.”
Haddaba, dhismaha ciidamada Ruushka ee aagga Ukraine ma dublamaasiyad qasab ah baa? Hadafka Kremlinku ma yahay in uu Washington ka soo saaro tanaasulaad iyo dammaanad qaadyo ammaan iyada oo aan loo baahnayn dagaal? Hadday sidaas tahay, waa hab heersare ah.
Andrei Kortunov, agaasimaha guud ee Golaha Arrimaha Caalamiga ah ee Ruushka, ayaa yiri “Waxaa jirta khatar dhab ah oo ka dhalan karta kor u kaca aan ku talagalka ahayn ee maamulka Ruushka.
“Uma malaynayo in Ruushku uu hadda diiradda saarayo sheekooyinka guusha siyaasadda arrimaha dibadda, dhab ama male-awaal,” ayuu yiri Mr Kortunov. “Ajandaha inta badan waa gudaha iyo walaaca dhabta ah ee Ruushku waxay ku xiran yihiin dhibaatooyinka bulshada iyo dhaqaalaha. Uma maleynayo in Putin uu awood u leeyahay inuu helo laba dhibcood oo dheeraad ah haddii uu bilaabo hawlgal dibadda ah.”